တောင်ကုတ်အကြမ်းဖက်မှုကြိုးကိုင်သူဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးခင်ညွန့်လော? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Politics, Issues » တောင်ကုတ်အကြမ်းဖက်မှုကြိုးကိုင်သူဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးခင်ညွန့်လော?
Posted by than shwe on Jun 7, 2012 in Politics, Issues | 13 comments
than shwe has written2post in this Website..
View all posts by than shwe →
အတွင်းရေးမှုး(၁) ဟောင်း ဥိံးခင်ညွန့် က ဘယ် တုန်း က ဝန်ကြိံး ချုပ် ဖြစ်သွားပါ လိမ့် တွတ် ပိံ ခောတ်နောက်ကျနေ ပါလား
မှားသွားတဲ့ ကွန် မင့် ကို မဖျက်တတ်ဘူး လုပ် ကြ ပါ ဥိံး တခါ မှမရေး ဘူး ဘဲ ဝင်ရေး မိလို့ ပါ
သူကြီးသာ ဖျက်လို့ရပါသည် ။
မမှီတမှီ ဥာဏ်နဲ့ … ရိုးရိုးလေးပဲ တွေးကြည့်ပါမယ် … ။
အရင်ခေတ် အခြေနေနဲ့ ရာထူး ၊ အာဏာကြီးစိုးချိန်မှာ ဒီလို သတင်းမျိုးထွက်လျှင် သာ သို့လော သို့လော တွေးကောင်းတွေးနိုင်ပေမယ့် … ယခုလို အကျဥ်းကျပြီး ပြန်လွတ်လာချိန်မျိုးမှာ … လုံးဝ ပတ်သတ်မှုရှိမယ် မထင်တော့ဘူး ။
ထောက်လှမ်းရေးပညာကို ဘယ်မှာပဲ သင်ခဲ့သင်ခဲ့ အခု အဲ့ပညာနဲ့ သူတရားဝင်ပတ်သတ်တာမှ မဟုတ်တော့ပဲ …. အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေနဲ့ ပတ်သတ်လို့ …. သူ့မှာ ဘာအကြံစည်မှ ရှိဟန်မတူဘူး ။ သူ့သားက ဘယ်သူနဲ့ပဲ ယူယူ ၊ ဒီလောက်ထိ လူမျိုးစွဲ ပြသနာကြီးထွားအောင် လုပ်စရာအကြောင်းတော့မရှိဘူး …. ။ ရခိုင်ပြည်နယ်လို ဒေသမျိုးက အပမ်းဖြေစရာငပလီလည်း ရှိတာကြောင့် … သူအပမ်းဖြေသွားတာလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ် ။ ဒါမှ မဟုတ်သူ့ ရဲ့ ဆွေမျိုးတွေရှိလို့၊ သာသနာပြုဖို့ စသဖြင့် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် သွားတာလည်းဖြစ်မယ် … မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လွတ်လပ်စွာ သွားလာတာကို … သိပ်ပြီး ဆန်းဆန်းပြားပြားမတွေးစေချင်ပါဘူး ။
စာရေးသူကို ကျွန်မ တစ်ခု တောင်းဆိုလိုတာက …. ရခိုင်ပြည်မှာ ဖြစ်တဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်လို့ သတင်း၊ ဓါတ်ပုံဖော်ပြချက်ကလွဲလျှင် ၊ စာရေးသူရဲ့ ထင်မြင်ချက် ဝေဖန်ချက်တွေမရေးသားဖို့ သဂျီးအတိလင်းကြော်ငြာထားပါတယ် ။ အခု ဒီပို့စ်က …. စာရေးသူရဲ့ ထင်မြင်ချက်ကိုသာ ရေးသားထားခြင်းမျိုးမို့ …. မလိုလားအပ်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ကောလဟာလတွေဖြစ်ပွားပြီး ဂေဇက်နာမည်ထိခိုက်မယ့် ကိစ္စမျိုးမဖြစ်စေဖို့ ၊ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းရေးပါလို့ပဲ ……. တောင်းဆိုချင်ပါတယ် ။
(လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲနိုင်ပါတယ် ။ )
ထင်တာလျှောက်ပြော ပြသနာတစ်ခုခုဖြစ်ရင် ဟိုလူ.သံသယဖြစ် ဒီလူ ထင် နဲ. ကျုပ်တို.မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အလုပ်မရှိအားနေ ကြတယ်ထင်တယ်နော်… ကိုယ်အလုပ်ကိုလုပ်ကြရင် ဒါမျိုးတွေ ဒီလို အထင်မျိုးတွေ ဖြစ်မယ်မထင်ဘူး…
အခုတော့ ဟိုလူက သွေးထို… သွေးကြွ၊ ဒီလူက မြှောက်ပေး ကွေးနေအောင်က… အဲဒါ အားနေကြလို.ဗျ…
@etone ရဲ့ Comment ကိုအပြည့်အ၀ထောက်ခံပါတယ်။
သူတပါးကို စွတ်ဆွဲဖို့ဆိုတာ ထင်တာလေးနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ သေချာအောင်အထောက်အထားတွေလိုပါတယ်။ တော်ကြာကောလဟလဖြစ်ပြီးရှုပ်ကုန်မယ်နော်။
အခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှာ တကယ်တမ်းဆိုင်သူတွေကိုဘဲ ထိရောက်တဲ့အပြစ်ရစေချင်တာပါ။
သေသေချာချာတော့ မသိပါဘူး ။ ကိုယ်ဘဲ အမှတ်မှားလို့လား ။ သိသူတွေ ပြောပြပေးနိုင်ရင်ကောင်းပါ့မယ်။
ဦးခင်ညွန့်သား ကိုရဲနိုင်ဝင်းယူလိုက်တာက silk air က လေယာဉ်မယ် (လေယာဉ်မယ်ဆိုလို့ချောချောလှလှလို့ မထင်နဲ့နော်။) စကာင်္ပူ သူလို့ မှတ်သားဘူး ပါသည် ။ သဘောမတူရတဲ့ အကြောင်းရင်းက အဲ့ဒီ့ အခိ်ျန် မြန်မာမတွေ နိုင်ငံခြားသား မယူရ ။ တရားရုံးတွေမှာ လက်ထပ်ပေးခြင်းမပြုရ အမိန့်ထုတ်ချိန်မှာ သူ့ သားက ကောက်ယူလိုက်လို့ သဘောမတူတာပါ ။ နောက်တော့လည်း ပြန်ခေါ်ထားတာပါဘဲ ။ အရင် AROMA ကော်ဖီဆိုင်တွေက သူ့ချွေးမဖွင့်ခဲ့တဲ့ ဆိုင်တွေပါ။
လွတ်လပ်ခွင့်လေးတွေက ဦးခင်ညွန့်ထွက်လာပြီး ခုနောက်ပိုင်းမှ ပိုရလာတာ ဆိုတာလေးလဲ မမေ့သင့်ပါဘူး ။
ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းခင်ညွန့် ငပလီကိုလာတုန်းက ဘုန်းကြီးဝတ်ထွက်စပါ။
ဟိုတယ်မှာ တည်းသွားတာပါ။အဲ့ဒီလူ ဟုတ်မဟုတ်ထားပါ ဒီမှာ နောက်
တော်တော်လေး ဆင်ခြင်တုံ တရားမဲ့ စွာနဲ့ ရေးထားတာပါလား တွတ်ပီရေ။ etone နဲ့MTY တို့ပြောတာက အရှင်းဆုံးပါ။
အခုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် သူ့ အတွက်ဘာအကျိုးအမြတ်ရမှာလဲ ??? သူ့ ခေတ်မှ မဟုတ်တော့တာ။
တစ်ခုခု ဖြစ်ပြီးသွားရင် ဟိုလူ့လက်ညှိုးထိုး ဒီလူ့လက်ညှိုးထိုးချင်တဲ့အကျင့်တွေကမကောင်းပါ ဘူး။သေချာ နေရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့။ ပြသနာတွေကို ဘယ်လိုပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းကြမလဲပဲ စဉ်းစားကြပါဗျာ။ မိမိထင်ရာရေးကြစတမ်းဆိုရင်တော့ မဆုံးတော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ ဦးခင်ညွန့် သားယူလိုက်တာ စင်ကာပူ နိုင်ငံသူလို့စိတ်ထဲမှာထင်မိပါကြောင်း။
ပစ္စည်းပျောက် အပါယ်ရောက် ဆိုတဲ့ စကားပုံလေးလို …
ပြဿနာတက်တော့ ဟိုလူ့ကိုထင် ဒီလူကိုထင် ဖြစ်တတ်တာမျိုးပါ..
ဒါပေမဲ့ သက်သေပြနိုင်တာ ဘာမှ မရှိပဲ ထင်ရာ အမည်တပ် မစွပ်စွဲသင့်ကြောင်းပါ…